Ukukhetha uRhulumente wokuDibanisa okanye ukwenza i-LLC
The elona lizwe lifanelekileyo lokubandakanya konke kuxhomekeke kwishishini lakho, iinjongo, iimfuno zejografi, irhafu kunye neemfuno zabucala. Kukho izibonelelo zokubandakanya i-Nevada, kunye ne-Delaware, nangona kunjalo, ukuba uyabandakanya kwaye uya kuqhuba ishishini ikakhulu kwilizwe elinye, okanye ilizwe lakho lasekhaya, emva koko elona lizwe linengqiqo ukubandakanya. Ukuba ufuna amanqanaba aphezulu abucala okanye izibonelelo ezinxulumene nerhafu, unokucinga ngokudibanisa ishishini lakho ngaphandle kwekhaya lakho. Siza kuthelekisa izibonelelo zokubandakanya amazwe ahlukeneyo.
Ukukhetha imeko elungileyo yokufaka ishishini lakho ngaphakathi, kuya kuba sisigqibo sakho sokuqala emva kokukhetha uhlobo lwento
Kufuneka uqale uzibuze ukuba uyakube uqhuba phi na okanye uninzi lweshishini lakho. Uninzi lwamashishini amancinci aya kubandakanya kwaye asebenze kwimeko apho baqhuba khona ishishini. Oku kulandela inkqubo yesigqibo esisengqiqweni nesilula, nangona kunjalo ayibandakanyi eminye imibuzo onokuzibuza yona xa usenza isigqibo sokuba leliphi na ilizwe elinikezela ngezibonelelo ezongezelelweyo. Cinga ubunini babucala, izibonelelo zerhafu kunye nokukhula okuthengiswayo esidlangalaleni, kwabaqalayo.
Kuya kufuneka ufunde malunga nezibonelelo zamazwe ahlukeneyo ngaphambi kokufaka ishishini. Ukuba ucwangcisa ukubandakanya ngaphandle kwelizwe lakho, okanye ilizwe apho uya kuqhuba khona uninzi lweshishini lakho, unokucelwa ukuba ufaneleke njengeziko langaphandle. Oku kukwabizwa ngokuba sisiqinisekiso sangaphandle, ngokuyimfuneko kubhaliswa njengeshishini elifakwe kwelinye ilizwe. Oku kufuna amanye amaphepha kunye nemigaqo.
Ukubandakanya ukuBucala okuphezulu
INevada inezibonelelo ezininzi zabucala ezinamandla ezenza imeko enomdla ekufakweni kweshishini. Kunye nokuba ngurhulumente ongenasimahla, iNevada ivumela abo batyunjiweyo ukuba babe ngamagosa kunye nabalawuli xa ufaka ishishini lakho. Oku kuthetha ukuba ungalugcwalisa uxwebhu olufakelwa ngurhulumente usebenzisa amagosa atyunjiweyo anyuliweyo kunye nabalawuli abamagama abo aya kumanqaku efayilini yoluntu. Olu luhlu olongezelelekileyo lwabucala lwabanini kunye nabalawuli beshishini elidibeneyo. Amagama awona malungu amanyeneyo ayagcinwa kwirekhodi yoluntu. Ukuba imfihlo yinkxalabo enkulu, emva koko unokuthatha elona lizwe lifanelekileyo lokubandakanya i-Nevada. Zombini iiNkampani kunye nee-LLC zivumelekile ukuba zityunjwe kumanqaku okufakwa okanye okwakhiwa.
Umbutho we-Nevada unokwenza ishishini nakweliphi na ilizwe ngamaxwebhu athile alula angenziwa ziinkampani ezihlanganisiweyo. INevada inezinto ezithile ezomeleleyo zokukhusela ezomthetho ezifana nokuba inkampani iyamangalelwa, amagosa, abalawuli kunye nabanini zabelo banokukhuselwa. Abanini benkampani yabucala yeNevada babucala babucala kwaye abadweliswanga kwiirekhodi zikarhulumente. Ngapha koko, akukho rhafu yengeniso kwi-Nevada. Ke, akukho rhafu yongezelelweyo ukuhlawula okanye iifom zerhafu yengeniso kwifayile eNevada. Umthetho weNevada LLC unezibonelelo ezithile ezibalulekileyo zokukhusela iiasethi ezigcinwe kwi-LLC. Xa ilungu le-Nevada LLC limangalelwa kukho izibonelelo ezisemthethweni ezinokuthi iiasethi ezigcinwe kwinkampani zikhuselwe ekubanjweni.
Olunye ukhetho oluphezulu ngu I-Wyoming LLC. I-Wyoming ikhusela iiasethi zelungu elinye njenge-Nevada kunye neDelaware. I-Wyoming, nangona kunjalo inemali ephantsi yonyaka yokufayilisha kurhulumente kwezi zinto zintathu. Ke, ngenxa yeso sizathu, sicebisa iWyoming ngakumbi nangakumbi.
Ukubandakanywa kwiNdawo yokuHlobo yeShishini
I-Delaware kudala ilikhaya lenye yezona ndawo zilungileyo zeshishini zokubandakanya ishishini lakho. IDelaware inento ebizwa ngokuba yi "Court of Chancery", ebandakanya iijaji ezimamela kuphela amatyala omthetho wobumbano. Olu buchule lubangela ukuba kwenziwe izigqibo ezifanayo. Ke, endaweni yokulwa idabi elisemthethweni elibizayo, iimeko ezifanayo ezidlulileyo zinokujongwa kwakhona ukuze zichaze ngokuthembekileyo iziphumo. Uninzi lweenkampani ezithengiswa esidlangalaleni zibandakanyiwe eDelaware, kwaye ngenxa yoku kukho umfanekiso wentembeko yoluntu enokuthi inyuse amathuba okuba abatyali mali banikezele ngemali kuluntu lwakho okanye kubucala. Ukuba isicwangciso sakho seshishini sine-IPO kuyo, elona lizwe lilungileyo lokubandakanya kuyo inokuba yiDelaware ukuze uthathe ithuba kwezi zibonelelo zilungileyo zeshishini.
Unezinto ezininzi eziphambili xa usenza isigqibo sokuba ishishini lakho lifakwa phi. Thatha ezi ngqwalaselo nzulu kwaye ulinganise izibonelelo nangaluphi na ukongezwa kokuhamba komsebenzi okanye amaxwebhu afunekayo. Ufuna ubumfihlo obungakanani kwaye ngaba ishishini lakho linendawo ebonakalayo okanye ngaba ukhonza kwimarike yesizwe okanye yehlabathi? Ukuqwalaselwa kufuneka kubandakanye nomthetho welizwe, amanye amazwe anembali yokuxhasa amashishini kumlo osemthethweni kwaye isigqubuthelo sobambiswano siyinzuzo enkulu kula matyala. Nceda ugcine engqondweni ukuba imeko efanelekileyo yokubandakanya konke kuxhomekeke kuwe, kwishishini lakho, kwiimfuno zakho nakwimeko, eyisebenzele enye, ayinakusebenza kuwe.
Igqityelwe ukuvuselelwa ngoMeyi 16, 2019